I-SteamOS nekusasa le-Linux | Kusuka kuLinux
mss-devel | | Imidlalo, Okunye
Okuthunyelwe kwangaphambilini bekungu wabelane ngezindaba ukuthi iValve ithuthukisa isistimu yokusebenza yekhonsoli yayo yangomuso yeSteam Machine, nokuthi izoba ne-Linux kernel. Futhi yize kungakadalulwa ukuthi yiluphi uhlobo lwamalayisense oluzosetshenziswa, iValve igcizelela ukuthi iSteamOS izokwakhiwa kakhulu "ngesoftware yomthombo ovulekile futhi evulekile" enezinto ezithile zobunikazi.
Lesi sinyathelo sesibindi esenziwe yiValve sithole ukunakwa kwezibalo eziningi emhlabeni wezekhompyutha, ikakhulukazi umhlaba wemidlalo yevidiyo. UJohn Carmack, umsunguli we-id Software, uthole izindaba ngokungabaza okuthile, yize ezwakalisa ukuzethemba esinqumweni sikaValve. «Kubukeka kuyingozi kimi ukuthuthela eLinux ... Ukube beyikhona enye inkampani bekungaba ukuhlambalaza mbumbulu, kepha kuyiValve, ngakho angiyena«. Eminye imibono evela ezibalweni ezikule mboni ukuphawula kukaLars Gustavsson, umqondisi wokudala we-EA Digital Illusions CE, noMarcus Persson, umsunguli weMojang nomqambi wesihloko sayo esidumile iMinecraft. Isikhulu sophiko lwe-EA esungula isaga seBattlefield, sitshele ingosi I-Polygon ukuthi uzoba "nentshisekelo enkulu" kwiLinux, nokuthi leplatifomu idinga kuphela isihloko esihle sokuzifaka ezweni elijwayelekile lemidlalo yevidiyo. Ugcina umdlandla wakhe ekutheni ophumelele kuphela ubenele i-XBOX Halo ukuthandwa. Ngokwakhe, uPersson uthathe isimemezelo "njengezindaba ezinhle." Futhi uMike Bithell, umsunguli we-indie "UThomas Wayewedwa", uzwakalise ukujabula kwakhe ngephrojekthi yeSteamOS, ethemba ukuthi "izothuthukisa" imboni yemidlalo ezimele.
Njengoba kuvezwe ku I-LinuxCon yalo nyaka, UTorvalds ukholelwa ukuthi iSteamOS «rKuzosiza ngempela ukwamukelwa kwe-Linux kuma-desktops«. Kuyena, uSteamOS «izophoqa ama-distros amaningana ukwenza ubuchwepheshe bawo buqine«. Okunye ukugxeka okuyinhloko ekusatshalalisweni kweLinux ukuthi ukuthuthukiswa kwezakhi kuyinto yokuzihlukanisa kakhulu, ukulimaza ukuhambisana. Umehluko wangaphakathi emhlabeni wabathuthukisi uyayiqinisa le nkinga, noma udale ukungezwani. Umsunguli we-Gnome uMiguel de Icaza ukholelwa ukuthi ingxenye yecala nayo iwela kuLinus Torvalds. Kodwa-ke, ngeTordvalds «[I-Valve] yinkampani enombono wokuthi lezi zinto kufanele zenziwe kanjani»Futhi kuzophoqa ukwabiwa okuhlukile ukuthi kucabange«uma ngale ndlela kwenziwa iValve, yile ndlela sonke okufanele sikwenze ngayo ...".
I-SteamOS ingaba ithuba langempela le-Linux. Inzuzo enkulu esheshayo ukuthi izokwenyusa intshisekelo yabakhiqizi behardware ekwenzeni imikhiqizo yabo ihambisane nohlelo lwethu lokusebenza. Empeleni, kwathi nje lapho kumenyezelwa iphrojekthi yeSteamOS, i-AMD neNvidia yamemezela ukwesekwa okungcono kwabashayeli beLinux. Ikakhulu, UNvidia usevele usebenza neValve nomphakathi weLinux ekwakhiweni kweSteamOS, futhi ithembise ukwaba eminye imibhalo yama-GPU ayo emiphakathini ezosebenza ngokuhambisana. Ngisho unikeze usizo lwakhe ekwakhiweni komshayeli womthombo ovulekile Okusha.
Umhlaba wemidlalo yevidiyo kuLinux usaqala. Noma kunjalo, ikusasa elithembisayo lingabonakala kule platform. Kulindelwe futhi inguquko embonini, engaqeda iMicrosoft ekuphakameni kwayo kubuchwepheshe bemidlalo yevidiyo. I-AMD isimemezele eyayo esikhundleni seDirectX ezobizwa Ingubo, futhi izokwenza kangcono kakhulu kunomlingani wayo weMicrosoft.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Imidlalo » I-SteamOS nekusasa le-Linux
Impela, ikusasa elinesoftware ephathelene nokungena eLinux.
Ngalokho, kungaphethwa ngokuthi isoftware yamahhala idinga usizo oluvela ezinkampanini zesoftware ephumelelayo ukuze iphumelele.
Isoftware yobunikazi ibilokhu iku-Linux, ubona nje i-flash noma i-java, ngokwesibonelo. Ukuthi uyayisebenzisa noma cha yisinqumo sawo wonke umuntu.
Ngabe uthola kuphi isihogo ukuthi iJava iphathelene?
Ngicabanga ukuthi usho ukuthi awukwazi ukubona ikhodi yomthombo yezinhlelo zeJava, ngoba zihlanganisiwe, kepha njengoba kunjalo, iBabele nalo libi kusukela ku-c, c ++, phakathi kwabanye awukwazi ukubona ikhodi yomthombo kanye kuhlanganiswe.
Inkululeko isezandleni zomuntu ngamunye. futhi empeleni ngicabanga ukuthi bambalwa kakhulu bethu abasebenzisa ukusatshalaliswa kwamahhala okungu-100%, okufana nalokho okunconywe yi-GNU ne-FSF, yize lokhu kusho ukuthi kufanele kucace ngokuphelele ukuthi kunzima kangakanani ukuba se- "FREEDOM" eqinile nene-parameter. iphrojekthi ye-GNU neStalman ngqo.
Abanye abaqondi ukuthi ifilosofi yesoftware yamahhala ifaka phakathi inkululeko yomsebenzisi kokumele akusebenzise.
Unemikhuba yokuphoqelela abantu ukuthi bafake ini kumakhompyutha abo.
Isebenzisa iLinux isivele ingukuthuthuka okuhle, isivele inenkululeko eningi. Vumela abasebenzisi basebenzise isoftware ephathekayo uma beyidinga, kuzohlala kungcono kunokusebenzisa iGuindous.
Ngicabanga ukuthi kuzosiza ukwamukelwa komsebenzisi. Kepha ngiyazibuza ukuthi kuzokwenzekani ngeMir neWayland SteamOS kuzoba nokuningi okuphathelene nalokhu.
Hhayi i-MIr / i-Wayland kuphela abacabanga ukuthi benza umuntu wesithathu - njenge-Chrome OS noma i-Android - futhi abashayeli babo BAHLUKILE
Angicabangi ngakho-ke ngicabanga ukuthi kuzoba iXubuntu efanayo neKwin eyenzelwe ukudlala
Kepha size siyibone ngeke sazi lutho
I-PS: I-ATI yamahhala isondelene kakhulu ne-ATI Linux + ye-MS WOS
INvidia yamahhala ikude neNvidia Linux + ye-MS WOS ephathelene
Yini engcono? Kubukeka sengathi ama-ATI ngisho nama-APU abo yiwona angcono kakhulu kuma-Steam consoles. Ngaphezu kwalokho, i-ATI ingaqeda ukushiya i-catalyst ukuze isebenze kuphela kubashayeli BAMAHHALA abanjengo-INTEL bese ...
Noma uNvidia uvule eyakho noma i-FYN
Uma iValve ishaya umaki, kuzofiwa kancane ama-distros.
Enye yezinto ezinhle zeLniux ubuningi bayo. Angicabangi ukuthi lokhu kuhlobene nokuphela kwe-distros. Okungaba kuhle ukuthi imibandela ihlangene ukukhuthaza umdlalo ku-Linux
Ibhizinisi nalapho iphuzu le-distros "elibucayi" likumaseva nemishini yokusebenza, i-steam ikude kakhulu naleyo makethe, ngakho-ke iRedHat noma i-Debian ngeke icwayize. AbakwaSteam bafuna ukuletha amafasitela futhi bawavalele ku-distro yawo, hhayi ukuncintisana.
I-Steam os, akuyona inguquko yeparadigm, kumane kuyisistimu yokudlala imidlalo, nokudla okuqukethwe kwe-multimedia, njenge-ps4 noma i-xbox eyodwa entsha ..., ayihlangene nakancane nabasebenzisi bedeskithophu abafuna ukuqhubeka nokusebenzisa izinhlelo ezijwayelekile.
Ngakho-ke… ingabe unyaka we-2014 uzoba unyaka weLinux?
Sinesikhathi esingakanani sizwa into efanayo ...
Kodwa-ke, kancane kancane yathuthuka ...
Esikhundleni salokho, iminyaka eyishumi yeLinux.
Ngiyangabaza ukuthi i-distro izophela ukuba khona, sizoba nokusekelwa okwengeziwe kwemidlalo yevidiyo yeLinux futhi manje izobe ikhona kubadlali bamageyimu abangafuni ukungena ngokugcwele kwiLinux futhi bangabasebenzisi beSteamOS kuphela elula, enye i-distro eyodwa. Ngeke ngiyeke ukusebenzisa i-linux kepha ngizoyeka ukusebenzisa amawindi ukuze ngikwazi ukudlala kuwo 🙂 ikusasa yi-gnu / linux
Njengoba ukuhlakanipha okudumile kusho: akukho ukusakazwa okubi. Singavumelana noma singavumelani neValve yokuthuthela eLinux, noma ngubani owenza njalo uzovula izindlela eziningi zokuhamba.
Hhayi nje isihloko esihle kepha… ezentengiso, isikhangiso se-TV. Ngabe ukhona oke wabona? Hhayi mina eMexico. Ngiyazi ukuthi i- $$ iyadingeka.Umuntu othile onentshiseko angakwenza, isisekelo, ngokuhlanganyela.
nansi eyodwa http://www.youtube.com/watch?v=LHZCZcJeTFE
Ngithi lapha iLinux inokuzuza okuningi kunokulahlekelwa, ukubheja kweValve lapho kungekho muntu obheje ngayo yonke imithetho, i-id software efuna ukubhejwa kepha ngaphandle kombono. Ama-Valve abheja kahle mathupha ngicabanga ukuthi kukhona okungahlanganisa i-linux i-repo yendawo yonke kepha into efana ne-deb noma i-archlinux uqobo ngicabanga ukuthi ingcono kakhulu. Iphinde ivule iminyango kubathuthukisi bazo zonke izinhlangothi ukuze kuphume okuthile okwengeziwe kwe-indie, ngendlela yokuthi i-valve isize indlela i-Intel ebakhipha ngayo abashayeli bayo futhi bangcono. Ngicabanga ukuthi ushaye ukhiye ngokugcina okuthile wonke umuntu anganquma ukuthi ufuna ukusebenzisa isoftware eyimfihlo enomthombo ovulekile. Ngokwami, angikuboni kabi futhi kukumuntu ngamunye.
Angifuni ukuphuma esihlokweni, kepha kubonakala kimi ukuthi umthombo ungenza ngisole ukuthi ukuthumele ngeLibreOffice noma bekuyi-copypasta.
Kungukuhlanganiswa nokuhunyushwa kwalezo zihloko, engibeka kuzo izixhumanisi ngoba ngihlala ngithanda ukwabelana ngemithombo yalokho engikubhalayo. Futhi sebenzisa i-LibreOffice kuphela ukuthethelela umbhalo, futhi uthuthukise isethulo. Ngabe kukhona kulezi zinto okukukhathazayo?
Cha okwenzekayo ukuthi bekungimangaza ukuthi ukuthayipha kwendatshana bekungakwenye ifonti kune-Droid Sans (leyo enqunywe kusengaphambili kuleli sayithi). Ngaphezu kwalokho, kubha yamathuluzi ye-WordPress futhi unezinketho ezifanayo zokuhlela umbhalo, kusukela kokumaphakathi kuya kumafonti. Kwakungadingekile ukuthi wenze konke ku-LibreOffice.
UDavid M. kusho
Ngibhale i-athikili ende impela ngale ndaba. Ngamafuphi, ngicabanga ukuthi izodonsela abasebenzisi nabakhiqizi. Ukuthi akekho kulabo abazoza ngenkululeko yesoftware? Vele, kepha lapho nje befika, bazoqala ukuxhumana nefilosofi yesoftware yamahhala, futhi lokhu kuzokwanda, noma kancane, ukubonakala komphakathi kwalefilosofi.
Ngokuphathelene "nokungcola" kwe-Linux nge-software ephathelene, angikhathazeki kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi imidlalo yevidiyo iyinhlobo ehlukile yesoftware. Uhlobo izinzuzo zesoftware yamahhala eziphansi kakhulu ngalo (lungcono uma belumahhala, kepha lokho, kimi njengomsebenzisi, kungenza ngithole imali encane kakhulu kune-processor yamagama yamahhala).
Ngemvume yakho yokuzinyusa, ngishiya i-athikili yami. Kunezixhumanisi zemithombo eminingi. http://derrotero.net/blog/mi-opinion-steamos-de-valve/
Isoftware yamahhala nenkululeko; Abanye bakusho ngokusobala, ubumfihlo buyinto enhle futhi isibonelo esicacile yiso esingabonakala lapha; Ukusuka kwaLinux ikwazile ukuqoqa imininingwane mayelana nokuthi isiphi isiphequluli esisisebenzisayo ngisho nangesistimu yethu yokusebenza; Uma lokho bekwenzeka, imininingwane eminingi ingaqoqwa mayelana nokuziphatha kwethu kudeskithophu noma kwi-PC ephathekayo, njll. Isoftware ingaba openource, copyleft noma yini oyifunayo, kepha iqiniso ukuthi, uma umuntu engazi ngezilimi zokuhlela (ngemiyalo yazo, izinqubo nokunye), kushiwo kahle ukuthi inkululeko noma ubumfihlo kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza Kuyi-UTOPIA, uma ungenalo ulwazi lohlelo nobunye ubuchwepheshe obuningi bezokuxhumana njengezinqubo ze-TCP / IP, njll.
Kuhle sibonga wonke umuntu futhi nakanjani kuDesdeLinux ngokwabelana ngale datha.
UHugo Iturrieta kusho
Ngalokhu, umphakathi weLinuxera wawo wonke ama-distros uzoba nezinzuzo zokuthuthuka kubashayeli behluzo nabanethiwekhi (okugxekwa kakhulu kwi-GNU / Linux).
NgikuFedora, ngizothola ukuthuthuka okuningi kubashayeli behluzo (imidwebo kuphela ngoba abanye abashayeli, njengamaphrinta, ukushayela ipeni, amagundane, amakhibhodi, amahedfoni, imakrofoni, kusebenza kahle) ukukwazi ukudlala ku-Steam (engivele nginayo ku-distro yami ) ngendlela esebenza kahle kakhulu.
Kancane kancane, imidlalo izofika (futhi-ke iyoba ngumthombo ovaliwe, uma kungenjalo, bekungeke kulungele ukuthuthukisa umdlalo, izinkampani zinezidingo zezomnotho, leyo yinhloso yazo futhi uma kungenjalo ... zizoshabalala) futhi ngiyaqiniseka ukuthi kube yi-linux unomphela eyeka ukubukeka njengoHlelo Lokusebenza lonjiniyela bamakhompiyutha (ukwehlisa lokhu, emndenini wami, kusetshenziswa iFedora kuphela, yi-distro eyintandokazi kusuka komncane kuneminyaka engu-9, kuya komdala kunayo yonke engama-53. Futhi sekuyizinyanga eziyisithupha kuphela selokhu sazama ama-distros ahlukahlukene ukufaka iLinux).
Phendula uHugo Iturrieta
Umngani wami uyiWindowsero yokuphila konke futhi uxhunywe kuSteam.
Nginokuthile engingabaza ngakho. i-xD